Ubukhulu obuncinci E Uritsho onaMavili amathathu wokuHamba iScoote...
Isithuthuthu soMbane esine-EEC 2000w 5000w 72V 32AH 50...
I-Eco-friendly scooter yombane yamavili amathathu 100km ...
Umgangatho ogqwesileyo wamavili amathathu e-bajaj tuk tuk yomkhweli...
I-2022 yefashoni yamavili amathathu e-scooter yombane yokudlula ...
Abakhweli bombane ohamba ngebhasikidi yebhasi yesikolo yemoto ...
Imoto encinci enevili eli-3 lemidlalo yemoto yombane...
Ibhetri esebenza ngoritsho umenzi wemetro encinci e ...
Imodeli entsha yombane we-rickshaw enzima yokulayisha i-batt...
2022 48v 800w i-rickshaw yomthwalo wamavili amathathu ...
Uyilo olutsha lwe-3 yesithuthuthu esinamavili ECO Friendly Cargo...
Ukuhanjiswa koMbane kwiTricycle yeTricycle Kwenziwa...
2021 ECO enobuhlobo Ibhayisekile yoMbane yoMbane ehambisa ezintathu ...
2021 ukhuseleko olungcono kunye nesantya esiphezulu 48V 4500W yombane a...
Izithuthuthu zombane zamavili amathathu ezithuthuthu zemoto yebhetri...
I-Eneji iKhuselekileyo yamva nje yaMandla oMbane oMbane weTricycle Ric...
2020 QSD Uritsho ozenzekelayo woMbane uyathengiswa Ngexabiso eliphantsi Uritsho woMbane waMavili amaThathu amaXabiso amaThathu aThengisayo iCng Autorickshaw
I-QSD-L5 ikwanayo ne-auto rickshaw
I-Oyile Drum Brake
ibhetri yomdlalo ::
48v 120ah ibhetri
2022 QSD Uritsho wokuziSebenzela woMbane uyathengiswa Ngexabiso eliphantsi Uritsho woMbane wamavili amathathu Ixabiso elishushu iCng Autorickshaw
Ubalulo lwemveliso ye-bajaj yombane i-auto rickshaw
* Akukho lungcoliseko kunye ne-Eco friendly Family E-auto rickshaw
* Iimayile zohambo losapho kunye neshishini
*Uyilo oludumileyo loyilo lwemodeli ye-L5
* Ukuba yiteksi
*Ixabiso eliphantsi kunekhareji yepetroli
* OEM ukuvelisa
Igama Lomfuziselo: Imodeli ye-QS -L5
Isantya esiphezulu : 30km/h – 50km/h
ITire: 4.00-10 itayara
Umothuko: ngaphambili suspensionhydraulic umgangatho olungileyo shocker
Imoto : 48V 4000W injini
Ibhuleki : Inkqubo ye-brake eyomeleleyo ye-oyile yokuqhawula i-oyile ye-bajaj
Umthamo wokulayisha: 1+6 umntu
Ukuba unomdla wethu wombane wetricycleauto rickshaw tuk tuk, wamkelekile umfowunelwaUJeff:
Whatsap / wechat: +0086 15030611128
Isampulu yokupakishwa kunye nokupakishwa kwe-SKD kumaqashiso : Isampulu yamavili amathathu karitsho ombane we-tuk tuk ikwi-SKD loadinginto kwityala leplanga, kunye nesakhelo sentsimbi yangaphakathi njengenkxaso.Ukupakisha okuqinileyo nokukhuselekileyo kukumavili amathathu oritsho wombane karitsho.
I-odolo yesampulu ye-MOQ: Uritsho we-bajajand yombane we-MOQ yiyunithi enye.
Isikhongozeli esigcweleyo samavili amathathu okupakishwa kwe-auto rickshaw i-bajaj yeetrikile zombane zombane ukupakishwa kwe-CKD( kuthetha ukuwiswa phantsi ngokupheleleyo).Amalungu esinyithi e-thebajaj i-tricycle yombane ipakishwe yi-bubble wrap, iindawo ze-Sapre zipakishwe ngebhokisi, njengeenjini kunye nezilawuli, iitshaja.Kukho isigqubuthelo sokhuselo esipakisha iibhokisi zeendawo ezisecaleni ezincinci ukunqanda umonakalo oselwandle.
Zonke iiodolo (ezinokwanelisa isikhongozeli esipheleleyo esiziinyawo ezingama-40) kuyilo oluNtsha olunamavili amathathu e-passenger bajaj electrictricycle kunye ne-electricbajaj auto rickshaw ingafumana inkxaso entle emva kwentlanganiso yoshishino.
Into yentlawulo: I-30% yediphozithi yi-TT njengentlawulo yangaphambili ngaphambi kokuvelisa.Kwaye ukuphumla kwe-70% yexabiso kufuneka ihlawulwe kwiveki enye ngaphambi kokulayisha i-tricycle yombane.
Ilayisha umba12. Ixesha lokuhanjiswa kwe-odolo eliqhelekileyo li-20-25days emva kokufumana intlawulo ephezulu.
I-Tricycle yoMbane kunye ne-EAuto Rickshaw Tuk TukUlwazi lweNkampani
Qiangsheng Group yasekwa ngo-2005, elise Xianghe, Langfang, umgama ukusuka kumzi-mveliso ukuya Tianjin port yi 120km.Siziingcali ekwenziweni kweetricycle zombane/iMotorized electric wheeler three wheeler car.we ithatha indawo eyi-42,000 square metres kwaye inabasebenzi abamalunga nama-500.
Ngaphaya koko, zonke iimveliso zethu (i-tricycles zombane/i-Motorizedbajaj tuk tuk rickshaw) zenziwe ngezixhobo eziphambili kunye nemigaqo engqongqo ye-QC ukuze kuqinisekiswe umgangatho ophezulu.Ngonikezelo oluzinzileyo kunye nexesha elifanelekileyo, umgangatho othembekileyo kunye nenkonzo enyanisekileyo, iimveliso zethu zithengisa kakuhle kwiimarike zasekhaya kunye nezingaphaya kolwandle.
Ngenxa yeenzuzo ze-logistic kunye ne-intanethi, i-Qiangsheng iqalile i-tricycle yombane / i-bajaj yombane i-rickshawtuk tuk bussiness kwiimarike zamazwe ngamazwe ukususela ngo-2000. Kuze kube ngu-Aprili ka-2014 i-Qiangsheng sele yakhe ikhonkco lokubonelela oluzinzile e-Asia, kuMbindi-mpuma we-Asia, e-Afrika, eMzantsi Melika, I-Australia kunye ne-india, njl.
Inkonzo emva kokuthengiswa
Inkonzo emva kokuthengiswa kwabo bonke abakhweli kunye nabalayishi amavili amathathu ombane kunye neBajaj Tuk Tuk Tuk Passengerelectric taxi
Ixesha lesiqinisekiso sobungakanani (ukuqhuba phantsi kweemeko eziqhelekileyo)
Imoto brand kunye nebhetri: 3-6 iinyanga
Siza kukunika iCD ukubonisa indlela yokudibanisa iitricycle zombane.Ukuba kukho nayiphi na into engacacanga, unokuqhagamshelana nathi.
Isakhelo somzimba: 2-3years
Yintoni i-FAQ ye-Electric Bajaj Auto Rickshaw kunye ne-E auto Rickshaw Tuk Tuk iteksi ethengiswayo?
1.Ingaba inkampani yakho yorhwebo enye okanye umzi-mveliso?
Umzi-mveliso + worhwebo (ubukhulu becala iifektri, ngoko umgangatho unokuqinisekiswa kunye nokukhuphisana kwexabiso)
2.Ixesha elingakanani inkampani yakho iqhuba ibhayisekile?
I-10years igxile kwi-tricycle, iminyaka emi-5 yokuthumela kwamanye amazwe amava.
3,Yeyiphi imigaqo yentlawulo owamkelayo?
ImiGaqo yeNtlawulo: T/T, okanye imali
4.Emva kokuba iodolo ifakiwe, ihanjiswa nini?
kuya kugqitywa ngexesha lokuveliswa kwemveliso kunye nobuninzi bakho. Ngokuqhelekileyo malunga neentsuku ezili-15.
5.Ukuba iimveliso azihambelani neemfuno, ukusombulula njani?
Ukuba iimveliso azihambelani neesampuli zabathengi okanye zineengxaki ezisemgangathweni, inkampani yethu iya kuba noxanduva kuyo.
6.Kuthekani ngenkqubo yentsebenziswano?
Qinisekisa iinkcukacha zomyalelo, i-30% idiphozithi, Lungiselela imveliso, uhlawule ibhalansi, ukuthunyelwa.
Ngaphambili: Uyilo oluLula oluLula uRitsho we-Asiya oTshisayo othengisa uRitsho woMbane uLondolozo loMbane lweTricycle yeTritshi yeMarike yaseYurophu
Okulandelayo: Ibhayisekile yoMbane yamva nje yoMbane ye-Auto Uritsho woMbane we-Tricycle yeTritshi yaseTshayina
IQiangsheng Group yasekwa ngo-2005, ifumaneka kwidolophu yaseXianghe (ipaseji yaseBeijing-Tianjing).
Lishishini lobuchwephesha eligxile kuloI-R&D yetricycle yombane,imveliso, intengiso, urhwebo kunye nenkonzo yezahlulo ezisecaleni.
Umzi-mveliso wethu ugubungela indawo ye-square yeemitha ezingama-50,000, ungumnikazi weyona mveliso iphambili kwayeizixhobo zokubona, iingcaliiindibano zocweyo zokuwelda, iindibano zocweyo zoomatshini, iindibano zocweyo zokupeyinta nge-electrophoresis kunye neendibano zocweyo zendibano.
Iitricycle zethu zombane ziwongweamanani amalungelo awodwa omenzi wechiza:I-asi ephindwe kabini yangasemva, ishedi enemisebenzi emininzi, i-Gearbox, ibhokisi yokugquma ye-Electic, isihlalo esishukumayo, isitulo esisongwayo, njl.njl. Siwongwa ngebrendi edumileyo yaseTshayina, iimveliso zeConsumers Trust, uphawu lweCCTV ngokunjalo.Sizakhele ubudlelwane obuzinzileyo bokubonelela eMzantsi Asia, kuMzantsi-mpuma Asia, KuMbindi Mpuma Asia, eAfrika, eMzantsi Melika.
Igama leNkampani: Xianghe Qiangsheng Electric Tricycle Factory
Idilesi yokusebenza: Qianwang Industry Park, Xianghe County, Langfang, Hebei, China
I-CKD yehlisa uthutho elwandle kwisithuthi esinye, gcina iindleko zokuhamba
Inkonzo ye-intanethi yeeyure ezingama-24
Siza kuthumela abathengi ividiyo ukubabonisa indlela yokudibanisa i-tricycle yombane yomthwalo okanye umkhweli.
Nayiphi na imibuzo yamkelekile
I-1.Q: Iphi inkampani yakho?Ndingatyelela njani apho?
A: Ifektri yethu ikwi-Xianghe County (i-Beijing-Tianjin corridor), iphondo laseHebei, eChina.Wamkelekile ukusindwendwela, abakufutshane
Isikhululo seenqwelomoya sisikhululo seenqwelomoya saseBeijing, kwaye siya kulungiselela ukuthathwa kwabathengi.
2.Q: Yintoni i-MOQ?
A: Ubuninzi bethu bomyalelo wezoqoqosho yi-20 'yexabiso le-GP.Isampulu kunye nokuthunyelwa kwe-LCL kwamkelwe, kodwa kubiza kakhulu.
3.Q: Ithini imigaqo yokuhlawula?
A: T/T yinto esiyithandayo.I-30% njengediphozithi, kunye ne-70% ngaphambi kokunikezelwa.Iifoto zeemveliso kunye neepakethi ziya kuthunyelwa kuwe ngaphambili
uhlawula imali eseleyo.
I-4.Q: Liliphi ixesha lokuhambisa?
A: Ubukhulu becala asinazo iimveliso esitokhweni, kuya kuthatha malunga neentsuku ezili-15-20 ukugqiba iodolo ngokuthetha ngokubanzi.
5.Q:Ithini imimiselo yakho yokuthumela?
I-6.Q: Sisiphi isatifikethi onayo?
A: Singafaka nasiphi na isatifikethi phantsi kwemfuno yakho ukuba i-odolo ye-QTY ilungile.
I-7.Q: Ngaba uvavanya zonke iimpahla zakho ngaphambi kokuhanjiswa?
A: Ngokuqinisekileyo!Uvavanyo lwe-100% phambi kokunikezelwa ngomgca wovavanyo lobuchwephesha luyimfuneko kuthi.
I-8.Q: Uyenza njani ishishini lethu ixesha elide kunye nobudlelwane obuhle?
A: Sigcina umgangatho olungileyo kunye nexabiso elikhuphisanayo lokuqinisekisa ukuba abathengi bethu bayazuza, kwaye siyabahlonipha bonke abathengi njengomhlobo owenza ishishini nabo ngokunyanisekileyo, kungakhathaliseki ukuba bavela phi.
2022 200cc 70km / h bajaj tvs tuk tuk tricycle ga ...
Ukusetyenziswa koMfama 1500w DC Motor Electric Tricycle for...
2022 intengiso eshushu kunye auto rickshaw e india Fashiona...
Isimbo seBajaj eshushu yaseIndiya ...
I-Tricycle yoMbane Uritsho odumileyo woMbane weRick...
China Cargo Tricyle Electric With 1000kg Loadin...
Sizinikezele ekuboneleleni abakhweli beebhayisikile owona mgangatho uphezulu kunye neebhayisekile ezifikelelekayo kunye nezixhobo ezifumaneka kwi-intanethi.Sikholelwa kumandla eebhayisekile kunye nento onokuyifeza ngazo.
© 20132021 QSD Onke Amalungelo Agciniwe.
iTukTuks TukTuk Manufactures Electric Tuk Tuk ITukTuk ITuk Tuk iyathengiswa Izithuthi ezinamavili amathathu